9 kulan ayaa Suarez laga mamnuucay - BBC News Somali
9 kulan ayaa Suarez laga mamnuucay
26 Juunyo 2014
Luis Suárez ayaa laga joojiyay sagaal cayaarood, waxaana laga mamnuucay muddo afar biloow ah in uu kubadda cagta cayaaro ama ku lug lahaado sinaba.
“Dhaqanka noocaas ah loogama adkaysan karo garoonka kubadda cagta, gaar ahaanna koobka adduunka FIFA, iyadoo dhowr million oo qof ay daawanayaan oo cayaaryahanona garoonka ku jiraan. Guddiga disibiliinka ayaa xisaabta ku daray dhamaan arrimaha dacwadda la xiriira iyo heerka dambi ee Mr Suarez ee sharciyada lagu qaaday la xiriira. Go'aanka ayaa deg deg u dhaqangalaya marka la baahiyo.,” Waxaa sidaas sheegay Claudio Sulser, guddoomiyaha guddiga dishibiliinka ee FIFA.
Guddiga dishibiliinka ee FIFA ayaa gaaray go'aanka kadib markii uu u muuqday Suarez in uu qaniinay cayaartoy markii ay iska horyimaadeen kooxdiisa Uruguay iyo kooxda dalka Tlayaaniga 24-ki bishii June, 2014.
Guddiga FIFA ee dishibiliinka ayaa go'aansaday:
Cayaaryahanka Luis Suáre laga joojiyay shan kulan oo rasmi ah, wuxuu tartanka ugu horeeya noqonayaa kan dhexmari doona kooxaha Colobia iyo Uruguay ee laba maalmood kadib dhacaya. Kulamada kale ayaa noqonaya kuwa xiga ee koobka adduunka hadii ay kooxdu u gudubto qaybaha ka dhimac cayaaraha adduunka ama cayaaraha qaranka ee dalkiisa ee xigi doona.
Waxaa kaloo laga mamnuucaya dhamaan falalka la xiriira kubadda cagta muddo afar bilood ah. art. 22 of the FDC.
Cayaaryahanka Suárez waxaa laga mamnuucaya in uu galo garoomada kubadda cagta inta xayiraaddu saaran tahay oo ay ku cayaarayso kooxda Uruguay ee dalkiisa inta sagaalka kulan ee cayaaraha laga mamnuucay ka dhamaanayaan.
Cayaaryahanka Suárez waxaa lagu amray in uu bixiyo ilaa 112 kun oo doolar ama lacagta Swiss-ka oo gaaraysa 100,000.
Go'aanka ayaa maanta la ogaysiiyay cayaartoyda iyo xiriirka kubadda cagta ee Uruguay.